မေမေကအစောကြီးကတည်းက သေသေချာချာ (လူဆန်း) | လမ်းအိုလေး
မေမေကအစောကြီးကတည်းက သေသေချာချာ (လူဆန်း)
June 8, 2009 by lanolay	Leaveacomment
မေမေက သူမကို စာချုပ်စာတမ်းနဲ့ မလွှဲအပ်သေးခင်ထိ သေချာအောင်မေးခဲ့ပါတယ်။ သမီးသူမျောက်တစ်ကောင်လို ထောင့်တစ်ခုမှာ လုံခြုံအေးချမ်းပြီး ဖရဲသီးတစ်စိတ်ကိုက်နေရင် မေမေက ကလေးများတဲ့ကြားက တော်တော်ပူပင်ခဲ့တာ သိသာတယ်။ သမီး သူ တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်လို တခြားအင်္ဂါတွေ ရှူရှိုက်လိုက်ပါနေရင် မေမေက အစကနေအဆုံး လက်မလွှတ်ချင်ပေမယ့် အဆုံးထိ နတ်ဘုရားမ, လ်ု သိတယ်။ သမီးဆီကို အမျိုးမျိုး ဖောက်ခွဲရေးကိရိယာတွေသုံပြီး နာကျင်ပြိုကျစေခဲ့ရင် မေမေက သူပြိုလဲနာကျင်ခဲ့ကြောင်းကိုလဲ အဆုံးစွန် ထိန်ချန်မထားဘူး။
သမီးကို သူ့အတတ်ပညာ အကျင့်ဆိုးတွေနဲ့ ပြုစားပြီး ဖတ်ပြီးသား စာအုပ်တစ်အုပ်လို ရောင်းစားခဲ့ရင် မေမေက သူအပေါင်းအသင်းစုံခဲ့တာ အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ မတားနိုင်ခဲ့တော့ တချို့အရာတွေ သော့ခတ်ထားခဲ့ရတယ်။ သူက ပတ်ဝန်းကျင်မျိုးစုံ ရောနေပြီး သူ့အဖေဆီကရော ၇၀စုလမ်း သူရဲတွေဆီကရော သူက ကြီးလေချဉ်လေ သံပုရာသီးပဲ။ သူ့ကို အမြဲမောင်းထုတ်ခဲ့တာ သူ ဘယ်တော့မှထွက်မသွားဘူးလို့ ကြွေးကြော်ရင်း ကျွေးထားရတာပဲံ။ သမီး ခံနိုင်ရည်မကောင်းမှာ၊ သမီး ဒုက္ခလှလှ လွှဲပြောင်းလက်ခံရမှာ၊ သမီးဘ၀ နာကြည်းစရာတွေနဲ့ပဲ ပျော်မွေ့တော့မှာ – ဂန္ဒီစာချုပ်၊ လင်္ကျာဖရီးမင်းစာချုပ်တွေအရ မေယုစစ်သင်္ဘောလေးတွေ၊ တိုက်ရေယာဉ် အမှန်က ကင်းလှည့်ရေယာဉ် တစ်ရာ့သုံးလို အခုခေတ် ငါးဖမ်းလှေသာသာ ရခဲ့ပါတယ်။ ဒီစာချုပ်အရ သမီးဘ၀မျှော်ခေါ်ချက်တွေမှာ ဘာတွေပါဝင်လိမ့်မယ် ခန့််မှန်းထားပါသလဲ. အတန်ကြာပျောက်ဆုံးနေလို့၊ မြင်နေကျ မဟုတ်တော့လို့ စိတ်နှလုံး၏ ပူပန်ရခြင်း၊ ဆေးရုံဆီ၊ ထမင်းမှန်မှန်ပို့ရခြင်း၊ စောင့်ရခြင်းတွေနဲ့ ထောင်ဝင်စာတွေ သွားသွားတွေ့ရခြင်ူ၊ မျက်နှာကျုံဲ့ရခြင်းတွေ တထိတ်ထိတ်တလန့်လန့် အိပ်မက်ဆိုးတွေ သေချာပါတယ်။ သမီးက ဒီနေရာမှာ လက်မှတ်ထိ်ုးပါ။ အန်တီက ဒီမှာ လက်မှတ်ထိုးပြီးရင် သမီးတစ်ခု အန်တီတစ်ခု။ သမီးသူ့ကို ယူသွားလို့ ရပါပြီ။ နောက်ဆုံးတစ်ခုခု ပြောပါဆိုလို့ ပြောရရင် အခုမှာခဲ့တာတွေ သမီးမမေ့ပါနဲ့။ အန်တီ့ဆီ ပြန်ပို့ဖို့လည်း အန်တီလည်း လူအိုဂေဟာမှာ စာရင်းသွင်းပြီးပြီ။ သမီးလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင် ဒီစာရွက်တွေပြန်သိမ်းပြီး အန်တီ့ဆီမှာပဲ ထားခဲ့၊ သမီးနဲ့အန်တီ အသက်အရွယ် ကွာတာက လွဲလို့ သူ့အတွက်တော့ အတူတူပဲ။
Mother from early on carefully
[Translated: Maung Thar Noe]
Mother before she gives him away with documents has asked carefully. My daughter, if he is bitingapiece of melon likeamonkey safe inacorner, Mother obviously is quite worried in spite of her many children. My daughter, if he like an animal keeps sniffing other limbs, Mother knows likeagoddess, although she doesn’t want to lose from beginning to end. If using various explosives he causes hurt and collapses, Mother won’t hold back to the very end the fact that he has collapsed and hurt.
If with his skills and evil habits he enchants and sells out likeaused book, Mother with her work unable to stop his gregariousness, has to lock up certain things. He has all kinds of milieu mixed up in him and from his own father or the 70s hooligans and he’salime that grows more acidic with age. They have always driven him out but clamoring he will never go away he has been accepted and FED. The daughter will lose her patience, she will accept the transfer with pretty much misery, enjoy her life with disappointments – with Kandy Areement, Lekya-Freeman Agreement, what will there be in your life’s expectations? Certainly there will be heart-felt worries because he’s lost for some time or he he’s not been seen as usual, sending food to hospital and waiting, visits to prison, lowered heads, horrible nightmares.
My daughter, sign here. Aunt will sign here. Then daughter one, aunty one. Now you can take him away. Finally, if you want me to speak something, don’t forget those things just said. As to sending him back to me, your aunt has just put her name in the home for the aged. If you cannot accept, take these papers back and leave him with me, daughter. Except for the difference in age between you and me, daughter and aunt, when it comes to beings for him,. We are the same.
(ရေးသူလူဆန်း – လူဆန်း။ နှစ်ကာလများ၊ အောက်တိုဘာ – ၂၀၀၈)
Categories: Kabyarz | Tags: လူဆန်း, ရေးသူလူဆန်း, Kabyarz, L=A=N=G=U=A=G=E, lanolay, Luu Hsan, post modern | Permalink.